PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: July 2010
အမျိုးသားအတွက် မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကရင်ပြည်...
မေ(၃၀)ဒီပဲယင်း နိူင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီး(၈၆)လပြည့်...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ တိုင်းရင်းသားများကို ကိုယ်စားမပြ...
၀နယ်မှာ အခြားပါတီများ လာရောက်စည်းရုံးခွင့် ပိတ်ပင်...
နအဖ စစ်ဆင်ရေးက ရွာသားတွေအပေါ် ပိုမိုပစ်မှတ်ထားလာ
တအာင်း (ပလောင်) ပါတီ တပြည်လုံးအဆင့် ယှဉ်ပြိုင်မည် ...
ကချင်ပြည်နယ် ဥရုချောင်းတံတား ကျိုးသွားရာမှ ကား၊ ဆိ...
စစ်အစိုးရရွေးကောက်ပွဲ ထင်သာမြင်သာရှိဖို့ ကုလသမဂ္ဂနဲ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲပါဝင်ခွင့် ဂျပန်အစိ...
မိုင်းကုတ်- ထိုင်းနယ်စပ် ကျောက်မီးသွေးသယ်မည့် ကားလ...
ကိုမင်းကိုနိူင်နှင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ လွတ...
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဗမာလူမျိုး တသိန်း နေရာချထားရ...
၂၀၁၀ အာဇာနည်နေ့ မြင်ကွင်း
(၆၃)ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား-ဂ...
မန်တုံ ဒေသအတွင်း TNP စည်းရုံးရေးမှူးများ ကန့်သတ်ြ...
ပြပွဲ ပြိုင်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်မှု
(၆၃)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် စာတမ်းဖတ်ပြိ...
သုခ နားနေဆောင် ဖွင့်ပြီ
စစ်အစိုးရတပ်နှင့် ကေအင်ယူ တိုက်ပွဲများပြန်ဖြစ်
အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို အလေးပြုပါသည်။
၆၃ နှစ်မြောက် ကေအဲန်ဒီအိုနေ့ နယ်စပ်တစ်နေရာတွင် ကျင...
(၂၂)နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ...
USDP အဖွဲ့ ဝင်များ ပါတီ မဲရရှိရန် TNP ပါတီနာမည် အလ...
စစ်အစိုးရရဲ့ လူမဆန်တဲ့ ပြစ်မှု အရေးယူနိုင်ရေး ဆွေးေ...
(၆၃)ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် စာတမ်းဖတ်ပြ...
မတရားဖမ်းဆီးခံရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိူင...
မပြေလည် မလောက်ငလို့ တပ်က နုတ်ထွက်ကြ
သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာနိုင်ပန်းလှအား ရည်စူး၍ ဆွမ်း...
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ပဋိပစ္စည်းကနေ အေ့ဒ်စ်ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်...
ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိူင်ငံ...
မပခ လက်နက် တိုက် ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခံရ ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု(မဒတ) စာစောင်အမှတ် ၁...
(၄၈)နှစ်မြောက် သမိုင်းဝင် ၇ ရက် ဇူလိုင် ကျောင်းသား...
မြန်မာအစိုးရကို ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် အရေးယူရရန် ယိုဇိ...
(တိုကျို) မိဘမဲ့ကလေးများ ရံပုံငွေအတွက် တေးဂီတ ဖျော...
သျှမ်းဆက်ဆံရေးရုံး (ဂျပန်) Shan Liaison Office - J...
(၄၈)နှစ်မြောက်7- July ဇူလှိုင် အထိမ်းအမှတ်ဟောပြော...
မိဘမဲ့ကလေးများ ရံပုံငွေ တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲ(တိုကျို...
ကေအဲန်ယူ အခြေခံ စစ်သင်တန်း အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံး
သမ္မတ အိုဘားမား အမေရိကန် လူဝင်မှု ပြုပြင်ပြောင်လဲရေး...
အမျိုးသားအတွက် မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကရင်ပြည်သူများ ကြိုဆို
ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ (၅)မှ ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စောလားပွယ်နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တချို့
ဇူလိုင်လ ၃၁ရက်။ စောသိန်းမြင့်(ကေအိုင်စီ)
နအဖစစ်အစိုးရ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေးကို လုံးဝငြင်းဆန်ကြောင်း ဒီကေဘီအေတပ်မဟာ(၅) ကလိုထူးဘောဗျူဟာ ဗျူ ဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စောလားပွယ်၏ ဆုံးဖြတ်သည် မှန်ကန်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သောကြောင့် အပြည့်အ၀ ထောက်ခံသည် ဟု ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ ကရင်ပြည်သူများက ပြောဆိုနေကြသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဒီကေဘီအေ စစ်ဦးစီးချုပ် ကျော်သန်းအပြင် နအဖစစ်တပ်မှ ထိပ် ပိုင်းအရာရှိများက ဗိုလ်မှူးကြီး စောလားပွယ်(ဗိုလ်နှုတ်ခမ်း)ကို အကြိမ်ကြိမ် ဖိအားပေးခဲ့သော်လည်း ဗိုလ်မှူးကြီး စောလားပွယ် သည် ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘဲ ယနေ့အချိန်ထိ လူထုဘက်ကို ရပ်နေလျှက်ရှိသည်။
မေ(၃၀)ဒီပဲယင်း နိူင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီး(၈၆)လပြည့် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား(တိုကျို)
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၃၀)ရက်။
မတရားသည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ကန့်ကွက်ခြင်းနှင့် မေ(၃၀)ဒီပဲယင်း နိူင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီး(၈၆)လပြည့် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)ဂျပန်ဋ္ဌာနခွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ တိုကျိုမြို့ရှီနာဂါဝါ အရပ်ရှိ မြန်မာစစ်အခွန်ရုံး(သံရုံး)ရှေ့ တွင် ယနေ့ ဇွန်လ (၃၀)ရက် နေ့ နေ့လည် ၃း၀၀ နာရီမှ ၄း၀၀ရီ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မေ(၃၀)ဒီပဲယင်း နိူင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီးတွင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူရဦးတင်ဦးတို့၏ အသက်ကို ကာကွယ်ရင်း အသက်ပေး စွန့်လှုခဲ့ကြသည့် သူများအတွက် ၀မ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ် လစဉ် (၃၀)ရက်နေ့ ကျရောက်တိုင်း ဂျပန်နိူင်ငံတွင် ယခုလို ကျင်းပပြုလုပ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သလို မေ(၃၀)ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှုတွင် ပါဝင်ကျုးလွန်ခဲ့ကြသည့် သူများတို့ကို အရေးယူ ဖြေရှင်းဖေါ်ထုတ်ပေးရန် တိုက်တွန်း တောင်းဆိုသွားခဲ့ကြပါသည်။
ယနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဂျပန်နိူင်ငံရောက် အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိ သူများ မြန်မာနိူင်ငံတိုင်းရင်းသားများ စုစုပေါင်း (၁၄၀)ကျော်ခန့် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံ ။ Lian Khan Sum(CNC-Japan)
Friday, 30 July 2010 13:14 သျှမ်းသံတော်ဆင့် .
၀တပ်နှင့် မိုင်းလား လက်နက်ကိုင်များ ထိန်းချုပ်ထားသော သျှမ်းပြည်အတွင်းရှိ မြို့ရွာများတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် အလားအလာမရှိ ဖြစ်နေရာ ထိုဒေသမှ တိုင်းရင်းသားများမဲထည့်ခွင့်မရ၍ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်အရ ကိုယ်စားမပြုဟု သူက ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
၀နယ်မှာ အခြားပါတီများ လာရောက်စည်းရုံးခွင့် ပိတ်ပင်ထား
၀ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး နယ်မြေအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲအတွက် တခြားပါတီများ လာရောက် စည်းရုံးခွင့် ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ ၀ ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့လအတွင်းက ၀ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး ပါတီအတွင်း ဦးထွန်းလူ ခေါင်းဆောင်တဲ့ ၀ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီနဲ့ ဦးဇီးလစ်စံ ဦးဆောင်တဲ့ ၀ အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီတို့ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ၀ နယ်မြေအတွင်း စည်းရုံးရေး ဆင်းဖို့ လာရောက်ခွင့် တောင်းခံတာကို ငြင်းပယ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်တွင် အခြေစိုက်ပြီး နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းခြင်း လက်မခံသည့် ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ (၅)ကို နအဖ တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့များက စစ်ရေးအရ ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်နေသည့်အတွက် ကေအန်ယူ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နော်စီဖိုးရာစိန်က ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by PNSjapan at 10:05 PM0comments
ရွာတွေကို တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အခုလိုတောတွင်းမှာပဲ တိမ်းရှောင် နေရသူတွေ များစွာရှိနေ
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်တွေဟာ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ထိန်းချုပ်ရာ အခြားဒေသတွေမှာ အပြစ်မဲ့ ကရင်ပြည်သူတွေအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပိုပြီးလုပ်လာနေတယ်လို့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးက ပြောပါတယ်။
Wednesday, 28 July 2010 17:22 သျှမ်းသံတော်ဆင့် .
၂၀၀၈ က ဗုဒ္ဓပြတိုက်အဖြစ်ပြောင်းလဲခံရလိုက်သည့် ညောင်ရွှေဟော်နန်းမှာ ယခုလအတွင်း တိုင်းရင်းသားရိုးရာပြတိုက် အဖြစ် ထပ်မံပြောင်းလဲ အမည်တွင်မည်ဟု စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
Posted by PNSjapan at 9:12 PM0comments
အန်ဒီအေ (ကချင်) တပ်မှူးဟောင်းများ မည်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မျှ မရှိ
လင်းနိုင်ဦး / ၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၀
နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းခြင်းကို လက်ခံလိုက်သည့် အန်ဒီအေ (ကချင်) နယ်မြေအတွင်းတွင် တပ်မှူးဟောင်းများသည် လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့် လုံးဝမရှိတော့သည့်အတွက် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေကြကြောင်း သိရသည်။
အချို့ အန်ဒီအေ အရာရှိဟောင်းများသည် မိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေမှုများပင် ရှိနေကြောင်း ကမ်ပိုင်တီနယ်မြေမှ တပ်မှူးဟောင်း တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “အရင်တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ လူဟောင်းတွေ အခု ဘာသြဇာ၊ ဘာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မှ မရှိတော့ဘူး။ တချို့ ဆင်းလည်း ဆင်းရဲကြတယ်။ အရာရာကို နယ်ခြားစောင့်တပ်နဲ့ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဗျူဟာကပဲ ခြယ်လှယ်နေတော့ စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆို အရင်တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အန်ဒီအေ ကမ်ပိုင်တီ စစ်ဦးစီးဌာနက လဇွန်ဟောင်းခေါင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်သေသွားတယ်။ အလားတူ ဂျွန်ဖောက်လည်း ဒီပုံစံ သေသွားတယ်။ လက်ရှိ ဒေသခံ တပ်မှူးဟောင်းတွေ အားလုံး စိတ်ဓာတ် ကျနေကြတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
တအာင်း (ပလောင်) ပါတီ တပြည်လုံးအဆင့် ယှဉ်ပြိုင်မည် .
Tuesday, 27 July 2010 17:22 သျှမ်းသံတော်ဆင့် .
၂၀၀၅ ခုနှစ်က စစ်အစိုးရဖိအားပေးမှုကြောင့် လက်နက်ချ ပလောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ခေါင်း ဆောင် မိုင်အိုက်မုန့်ဦးဆောင်သည့် တအာင်း (ပလောင်)အမျိုးသားပါတီက တပြည်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ၂၀၁၀ရွေးကောက် ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်မည်ဟု စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ဥရုချောင်းတံတား ကျိုးသွားရာမှ ကား၊ ဆိုင်ကယ်များ ရေထဲမျှောပါ
မိုးရေကြောင့် ဥရုချောင်း ရေကြီးပြီး အခုလိုလူနေအိမ်များ ရေလွှမ်းခံနေရပုံ။ ဓါတ်ပုံ - ကချင်သတင်းဌာန
အင်္ဂါနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 27 ရက် 2010 ခုနှစ် သတင်း - ကချင်သတင်းဌာန .
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်စိမ်းထွက်ရှိရာ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ဥရုချောင်း ရေကြီးပြီး တစ်ခုတည်းသော ဗေလီတံတား ကျိုးခဲ့ရာမှ လူ ၅ ယောက်ထက်မနည်း သေဆုံးမှု ရှိခဲ့သည်။ ကျောက်ကျဉ်းမှော်သို့သွားရန် အဓိကဖြတ်ကူးရသည့် ၄င်းဗေလီတံတားသည် ဇူလိုင် ၂၆ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲတွင် ဥရုချောင်း ရေလျှံလာသောကြောင့် တံတားအလယ်မှ ကျိုးပျက် သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများပြောသည်။
Posted by Ma Nandar at 2:27 AM0comments
ကရင်လူထု ၅၀၀ကျော် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကို ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာ
မော်လီချိုင်းကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းမှ သေ့ဘောဘိုးရွာသူရွာသားအချို့ (ဓါတ်ပုံ - ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့နယ်၊ ကျေးရွာလေးရွာမှ ဒေသခံလူထု ၅၀၀ကျော်သည် မိမိတို့ဒေသတွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်လာနိုင် သည့် အခြေအနေများကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင်၊ ဖုတ်ဖရမြို့နယ် မောကဲထာ့နှင့် မော်လီချိုင်းကျေးရွာသို့ ယနေ့နံနက်တွင် ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာကြသည်။
မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကဗျာပြိုင်ပွဲသို့ မည်သူမဆိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြီုနိုင်ပါသည်။
၁။ ရှစ်လေးလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သောစက်ဆိုသည့်ကဗျာဖြစ်ရမည်။
ကဗျာပေးပို့သူသည်။ မိမိတို့`၏ အမည်၊ လိပ်သာ ၊ အီးမေး၊ အပြည့်အစုံရေးသား၍
buffalod8888@ gmail.com သို့သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်ထက်နောက်မကျစေပဲ ပေးပို့ရပါမည်။
Posted by Ma Nandar at 2:10 PM0comments
စနေနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 24 ရက် 2010 ခုနှစ်
Posted by PNSjapan at 1:41 PM0comments
ဓါတ်ပုံ _ AFP
အိန္ဒိယနိုင်ငံကို သွားရောက်မယ့် သူ့ရဲ့ တရားဝင် အလည်အပတ် ခရီးစဉ်ကို တရက်ကြိုစောပြီး ဗုဒ္ဓဂါယာကို သွားမယ့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ရဲ့ခရီးစဉ်ကို ဗုဒ္ဓဂါယာက စာသင်သား သံဃာတော်တွေက သပိတ်မှောက်ဖို့ စီစဉ်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 1:22 PM0comments
ဖာပွန်ခရိုင်မှ သဒါးဒဲကျေးရွာ ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့ခံရ
ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဖာပွန်ခရိုင်၊ လူသောမြို့နယ်အတွင်းရှိ သဒါးဒဲကျေးရွာတွင် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်း ၂း၃၀နာရီအချိန်၌ နအဖ စစ်ကြောင်း တကြောင်း ၀င်ရောက်လာပြီး ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်သည်ဟု နယ်ခံတဦးက ပြောသည်။
သူက “ဒီနေ့ ညနေပိုင်း ၂နာရီခွဲလောက်မှာ နအဖတပ်တွေက သဒါးဒဲရွာထဲမှာ ရောက်လာပြီး ရွာလုံးကျွတ်ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက် တယ်။ သူတို့ (နအဖ) ရွာထဲကို မလာခင်မှာ မနေ့က လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ရွာထဲမှာ လှမ်းပစ်တယ်။ ရွာသားတွေကတော့ ရွာထဲမှာ လက်နက်ကြီးတွေ ကျလာတော့ ကိုယ်လွတ်ရုန်း ထွက်ပြေးကြတာပေါ့၊”ဟု ပြောသည်။
ယမန်နေ့က ထိုနယ်မြေအနီးတ၀ိုက်တွင် နအဖတပ်များနှင့် ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၅) လက်အောက်ခံတပ်များ ပြောက်ကျားတိုက် ပွဲ အနည်းငယ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ၎င်းတပ်များသည် သဒါးဒဲရွာထဲသို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်အတွက် ရွာသူ ရွာသားများမှာ ယမန်နေ့ ကတည်းက ရွာကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရသည်ဟု ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၅)မှ ဗိုလ်မှူးစောကလယ်ဒိုက ယခုလို ပြောဆိုသည်။
“မနေ့ကတော့ အဲဒီနအဖတပ်ဟာ ကျနော်တို့တပ်တွေနဲ့ တိုက်ပွဲနည်းနည်း ပြောက်ကျားဖြစ်သေးတယ်။ နောက်တော့ သူတို့က သဒါးဒဲရွာကို လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ လှမ်းပစ်တော့ ရွာသားတွေ အဲဒီအချိန်ကတည်းက တောထဲ ထွက်ပြေးတာ ရွာမှာ ဘယ်သူမှ မကျန်ကြတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် နအဖစစ်ကြောင်းက ၀င်လာပြီး ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့လိုက်တာပဲ။”ဟု ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
ယင်းသို့ ၀င်ရောက်မီးရှို့သည့် နအဖ စစ်ကြောင်းမှာ မည်သည့်တပ်ရင်းကဆိုသည်ကို ယခုအချိန်တွင် အတိအကျ မသိရှိရသေး သော်လည်း ၎င်းနယ်မြေဒေသတွင် လှုပ်ရှားနေသည့် နအဖ စစ်ကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ်(၂၁)၏ လက်အောက်ခံတပ်ရင်းများမှ ဖြစ်နိုင် သည်ဟု ဒေသခံများက ခန့်မှန်းပြောဆိုသည်။
ထိုဒေသရှိ နအဖတပ်များသည် ယခု လပိုင်းအတွင်း ပုံမှန်မဟုတ်သည့် အထူးစစ်ဆင်ရေးပုံစံမျိုး လှုပ်ရှားလျှက်ရှိရာ ယခုလို နအဖ တပ်များ ၀င်ရောက်မီးရှို့မှုမှာ ၎င်းစစ်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်နိုင်သည်ဟု ထိုဒေသမှ လုပ်သက်ရင့် ဆေးတာဝန်ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် သဒါးဒဲ ရွာသူရွာသားများမှာ တောထဲတောင်ထဲသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီး မိုးတွင်းကာလတွင် နေထိုင်၊ စားသောက်ရေး ခက်ခဲနေသည့် ၎င်းရွာသားများကို ဆေးဝါးများ သွားရောက်ကူညီရန် နယ်လှည့်ကျောပိုးအိတ်ကျန်းမာရေး လုပ်သားများ အဖွဲ့(BPHWT)က စီစဉ်ပြင်ဆင်နေသည်ဟု သိရသည်။
သဒါးဒဲကျေးရွာသည် နအဖတပ်စခန်းနှင့် နီးသလို နအဖစစ်ကြောင်းများ လှုပ်ရှားသွားလာနေသည့် လမ်းကြောင်းတွင် တည်ရှိရာ သတင်းရရှိချိန် ယနေ့ညနေအထိ အဆိုပါ နအဖတပ်များမှာ ရွာထဲမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ဖာပွန်မြို့မြောက်ဖက် မိုင် ၄၀ ၀န်းကျင် ကွာဝေးသည့် သဒါးဒဲကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၅၀၀န်းကျင်၊ ရွာသူရွာသားဦးရေ ၅၀၀နီးပါးရှိ ပြီး ၎င်းရွာရှိရာဒေသသည် ကေအဲန်ယူ ထိန်းချုပ်ထားသည့် နယ်မြေလည်းဖြစ်သလို နအဖ စစ်ကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ်-စကခ(၂၁) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများလည်း လှုပ်ရှားလျှက်ရှိသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၆ခုနှစ်ကလည်း ရွာအနီး စပါးခင်းတွင် သဒါးဒဲရွာသား ၃ဦးကို နအဖတပ်များက အကြောင်းမဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့သည်။
Copy from_ burmese.bnionline.net
(၁၇) ကြိမ်မြောက် အာရှဒေသ လုံခြုံရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ တက်ရောက်နေကြသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ (ဇူလိုင်လ ၂၃၊ ၂၀၁၀)ဓာတ်ပုံ AP
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲပါဝင်ခွင့် ဂျပန်အစိုးရ ထပ်မှန်တောင်းဆို
ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ခတ်ဆုယ အိုခါဒါ(၀ဲ)နှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ ဗီယင်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့တွင် ကျင်းပသော အာဆီယံနှင့်အပေါင်း သုံးနိုင်ငံ နှစ်ပတ်လည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းဝေးတွင် ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်နေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ အလယ်တွင် ရပ်နေသူမှာ အင်ဒိုနီရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာတီနာတာလီဂါဝါ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo_AFP)
၂၀၁၀ ဇူလိုင် ၂၃ ။
စစ်အစိုးရက ကျင်းပမေးမယ်ဆိုတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ခွင့် ရနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ခတ်ဆုယ အိုခါဒါ က စစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းကို ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက် မနေ့တုန်းက တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဗီယင်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့မှာ ဇူလိုင် ၂၁ ရက်နေ့ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့က စတင်ကျင်းပတဲ့ အာဆီယံ အပါအ၀င် အာရှဒေသတွင်း လုံခြုံရေး ညီလာခံကို တက်ရောက်လာစဉ် ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အခုလို ပြောဆိုလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ စစ်အစိုးရနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ခွင့်ရအောင် လုပ်ဖို့ ဂျပန်အစိုးရ အနေနဲ့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ အာကမစု က RFA ကိုပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွေ လုပ်ဖို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းကို တိုက်တွန်းခဲ့သလို ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အမြန်ပြန်လွတ်ပေးဖို့ကိုပါ ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ခတ်ဆုယ အိုခါဒါ က တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသွားပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေတွေကို အပြောင်းအလဲမလုပ်လဲ မြန်မာစစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲကို ဆက်လုပ် သွားမယ်ဆိုရင် ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလို့ ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ မှတ်ယူနိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက RFA ကိုပြောပါတယ်။
သတင်းမှတ်တမ်း မူရင်း ။.rfa.org/burmese/news
Posted by PNSjapan at 7:09 PM0comments
ဓါတ်ပုံ Cဓါတ်ပုံ CIDKPIDKP
ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၀ နာရီ ၄၇ မိနစ် .
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူခရိုင် အရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိ တောတောင်များအတွင်း ပုန်းအောင်း နေထိုင်ကြရသည့် IDP ခေါ် ကရင်ရွှေ့ပြောင်း စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၄၅၀၀ ကျော်အတွက် ငှက်ဖျား ရောဂါဆေးများ အရေးပေါ် လိုအပ်နေကြောင်း ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်အခြေစိုက် ကရင်အဖွဲ့အစည်းများမှ သိရသည်။
အရေးပေါ် ဆေးဝါးလိုအပ်နေသူများသည် တောင်ငူခရိုင် ထန်းတပင်နှင့် သံတောင်မြို့နယ်များအတွင်း ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသည့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၅ဝဝ ကျော်ထဲမှ ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းဒေသအတွင်း၌ ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုမှာ ယခင်လမှစ၍ သိသာစွာ များပြားလာကြောင်း ၎င်းတို့ကို ကူညီနေသည့် The Committee For Internally Displaced Karen People - CIDKP က ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့လက သူတို့တွေရှိတဲ့ နေရာကို လိုက်ပြီး ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးချက်တွေ လုပ်တဲ့အခါ ၁ဝ ယောက်မှာ ၇ ယောက် လောက်က ငှက်ဖျားပိုး တွေ့ရတယ် ဆိုတော့ ၁ဝဝ မှာ ၇ဝ လောက် ဖြစ်နေတာပေါ့လေ။ ငှက်ဖျားကြောင့် အသေ အပျောက် တွေလည်း ရှိပါတယ်” ဟု CIDKP သတင်းထုတ်ပြန်ရေး တာဝန်ခံ စောအယ်ဝါးသူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“သံတောင်ဘက်မှာ ခြင်တော်တော်ပေါတယ်။ သတ်လို့တောင် မနိုင်ဘူး။ အိပ်မရလောက်အောင်ကို ကိုက်တာ။ ညနေ နေဝင်ချိန်လောက်ကတည်းက ကိုက်လိုက်တဲ့ခြင်က မိုးလင်းတဲ့အထိ ကိုက်နေတာ။ အဲလောက်ကို ပေါတာ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ငှက်ဖျား အလွယ်တကူ ဖြစ်နေတာပေါ့” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ငှက်ဖျားဖြစ်နေသည့် အဆိုပါ ဒုက္ခသည်များကို CIDKP ၊ နယ်လှည့်ကျောပိုးအိတ်အဖွဲ့ BPHWT နှင့် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU ဆေးတပ်ဖွဲ့တို့မှ ကုသမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနေသော်လည်း နိုင်နင်းမှု မရှိသဖြင့် ကူးစက်မှုနှုန်း တိုးပွားလာနေသည်။
တောင်ငူ အပါအဝင် ညောင်လေးပင်၊ ဖာပွန်နှင့် သထုံ စသည့် ခရိုင် ၄ခရိုင်တွင် ရွှေ့ပြောင်းစစ်ပြေးဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၅ သောင်းကျော်ရှိကြောင်း ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် အခြေစိုက် နယ်လှည့်ကျောပိုးအိတ် ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ညောင်လေးပင်၊ ဖာပွန်နှင့် သထုံ ခရိုင်များတွင်လည်း ငှက်ဖျားနှင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကူးစက်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်းနှင့် လူနာဦးရေ စာရင်းကိုမူ ပြုစုနေဆဲဖြစ်ကြောင်း နယ်လှည့်ကျောပိုးအိတ် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ ဦးမန်းမန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“သူတို့က နအဖ စစ်တပ်လှုပ်ရှားမှုကို ကြည့်ပြီးနေရတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တွေဆိုတော့ နေအိမ် အတည်တကျ မရှိသလို ခြင်ထောင်တို့၊ စောင်တို့ ဘယ်အပြည့်အစုံ ရှိမလဲ။ တချို့လည်း မီးဖိုပြီး အိပ်တယ်။ တချို့လည်း ဒီတိုင်း ပေပြီး အိပ်တယ်။ ဒီလိုခြင်ပေါတဲ့ ကာလဆိုတော့ ဘယ်နိုင်မလဲဗျာ”ဟု သူက ပြောသည်။
ရွှေ့ပြောင်း ဒုက္ခသည်များသည် တောတောင်များအတွင်း ယာယီဝါးတဲများဖြင့် ဖြစ်သလိုနေထိုင်ကြရပြီး ယခုလို မိုးတွင်းကာလ စိုစွတ်သည့် နေရာများ၊ ရေအိုင်စပ်များ၊ ခြုံနွယ်များမှ ခိုအောင်းပေါက်ဖွားကြသည့် ခြင်များကိုက်ခြင်းကို ခံရသဖြင့် အဆိုပါ ကူးစက်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားရသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ခရိုင် ၄ ခရိုင်ရှိ ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များသည် အစားအသောက်၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ အဝတ်အထည်၊ စောင်၊ ခြင်ထောင်နှင့် ပညာရေး အကူအညီများ လိုအပ်နေကြောင်း ဒုက္ခသည်များကို ကူညီနေသည့် အဖွဲ့များထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
တောင်ငူခရိုင်ရှိ တောင်ငူ၊ ထန်းတပင်၊ သံတောင်၊ အုတ်တွင်း၊ ကျောက်ကြီး၊ ဖြူး၊ ရေတာရှည် စသည့် မြို့နယ်အားလုံးတွင် ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစ၍ ငှက်ဖျားကူးစက်သူ စုစုပေါင်း ၇ဝ၁ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ မရှိကြောင်း စစ်အစိုးရ ခရိုင်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ယင်းတွင် တောတောင်များ အတွင်း ငှက်ဖျားကူးစက်ခံနေသည့် ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များ မပါရှိပေ။
တောင်ငူခရိုင်တွင်း၌ ဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးအေး ဦးဆောင်သည့် စစ်ဆင်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေး ဌာနချုပ် (စကခ)၇ လက်အောက်ခံ ခြေလျင် တပ်ရင်းများ ဖြစ်သည့် ခလရ ၁ဝ၂၊ ၂၅ဝ၊ ၂၆၁ အပါအဝင် ခြေမြန်တပ်ရင်း ခမရ ၃၃၆၊ ၄၂၁၊ ၄၂၃၊ ၄၂၄၊ ၄၂၅၊ ၄၂၆၊ ၄၂၇ စသည့် တပ်များ လှုပ်ရှားနေပြီး ယခုနှစ် မတ်လက သံတောင်မြို့နယ်တွင်း ဒေသခံ ကရင်လူမျိုးများ ပိုင်ဆိုင်သည့် ဖာလာခြံနှင့် ဒူးရင်းခြံများ ရာနှင့်ချီ၍ မီးရှို့ဖျက်ဆီးကာ မြေမြှုပ်ဗုံးများ ထောင်ခဲ့ကြသည်ဟု CIDKPက ဆိုသည်။
“အများစုက သူတို့ရွာတွေကို နအဖ တပ်တွေက မီးရှို့လို့ ထွက်ပြေးနေကြရတဲ့သူတွေ။ တချို့ကျတော့လည်း အိမ်တွေ ကျန်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွာထဲနဲ့ ရွာအပြင်တွေမှာ စစ်တပ်က မိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တော့ မပြန်ရဲကြတော့ဘူး။ ပြန်လို့ သေတဲ့လူတွေ၊ စစ်တပ်နဲ့တိုးပြီး ပစ်သတ်ခံရတဲ့ လူတွေလည်း မနည်းဘူးလေ။ ဒါကြောင့် တောထဲမှာပဲ ပြေးနေကြတယ်” ဟု CIDKP မှ စောအယ်ဝါးက ပြောသည်။
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ရွှေ့ပြောင်းစစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအရေးသည် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖြတ်လေးဖြတ် စစ်ဆင်ရေး ကာလမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းသိရသည်။ KNU ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို ကူညီနေသည်ဟု စွပ်စွဲကာ စစ်အစိုးရတပ်များက ကျေးရွာများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ကြောင့် ရွာသူရွာသားများမှာ တောတွင်းသို့ ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်ခဲ့ရာမှ IDPများ ဖြစ်လာခဲ့ကြရခြင်း ဖြစ်သည်။
Copy from_ www.mizzimaburmese.com/
Posted by PNSjapan at 4:13 PM0comments
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် မျိုးဆက်သစ်တို့အတွက် လူမှုရေးသင်တန်း၊ ဈာပနပို့ ဆောင်ရေးသင်တန်း၊ ဆေးကူညီမှုသင်တန်း၊ အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံသင်တန်း၊ ပန်းချီသင်တန်း၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ ဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်း စသည့် သင်တန်းတို့အပြင် ဖျတ်ခနဲပေါ် ဆတ်ခနဲရိုက် ဟုခေါ်သော ဓါတ်ပုံသင်တန်းကိုလည်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျှက်ရှိသည်။ ယင်းသင်တန်းကို ဈာပန ပို့ဆောင်ရေးသင်တန်းဆင်း ပရဟိတ လူငယ်/လူရွယ်များ တတ်ရောက်ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဓါတ်ပုံသင်တန်း သင်ကြားရခြင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ အများပြည်သူတို့၏ နာရေးရုပ်အလောင်းများ သယ်ဆောင်ရာတွင်၎င်း၊ ရဲမှုခင်းဆိုင်ရာဖြစ်သော ရေနစ် သေဆုံးမှု၊ ဆွဲကြိုးချ သေဆုံးမှု၊ ရထားကြိတ် သေဆုံးမှု၊ ပိုင်ရှင်မဲ့ သေဆုံးမှုများနှင့် တိုင်းကျိုး ပြည်ကျိုးပြု အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်/ သူရဲကောင်းတို့၏ ဈာပနအခမ်းအနားများ၊ သာသနာ့ အာဇာနည် ရဟန်း သံဃာ ဆရာတော်ဘုရားကြီးများ၏ အန္တိမဈာပန အခမ်းအနားများ စသည့် ထူးခြားသော ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ရပ်များ၊ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းသို့ လာရောက်ဆေးဝါးကုသကြသော ထူးခြားသည့် ရောဂါဝေဒနာရှင် လူနာများ၏ ဆေးဝါးကုသခြင်း ပုံရိပ်မှတ်တမ်းများတို့ကို နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၏ သမိုင်းမှတ်တမ်းများအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး နောင်တစ်ချိန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)အား ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမည့် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်/လူရွယ် ခေါင်းဆောင်များအား ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ပေးဆပ်ခဲ့မှု သမိုင်းစစ် သမိုင်းမှန်များကို သိရှိနားလည် သဘောပေါက်ကာ ကျွန်တော်တို့၏ ပေးဆပ်မှုထက် မနှိမ့်ကျသော သာလွန်သော ပေးဆပ်မှုများကို တိုးမြင့်၍ ပြည်သူလူထုအား အလုပ်အကျွေးပြု သွားနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖျတ်ခနဲပေါ် ဆတ်ခနဲရိုက် ဓါတ်ပုံသင်တန်းအား သင်ကြားပို့ချခြင်း ဖြစ်သည်။
သင်ကြားပို့ချရာတွင် ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာ ကိုင်တွယ်နည်း၊ အလင်းအမှောင် ဓါတ်ပုံပညာ အယူအဆနှင့် ဖျတ်ခနဲပေါ်လာသော ပုံရိပ်တို့ကို လျင်မြန်သွက်လက်စွာ အမိအရ ရိုက်ကူးနိုင်မှု တို့ကို အဓိကထား၍ ဓါတ်ပုံပညာရှင် TV သက်မွန်မှ သင်ကြားပေးလျှက်ရှိကာ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူမှ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲတွင် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အား အသင်းသူ/သားတို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြား သွားခဲ့သည်။ သင်တန်းကာလမှာ (၄) ပါတ်ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပြီး ယခု ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန် ခန့်တွင် ဈာပနကူညီမှု (၁၀၀၀၀) ပြည့်မည့်နေ့၌ သင်တန်းသူ/သားများအား “ဘ၀နိဂုံး အဆုံးပုံရိပ်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၇ ခု စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကာလ သံဃာတော်များ ဆန္ဒပြနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - မြင့်မိုးမောင်/ဧရာဝတီ)
“အခု ပတ်စ်ပို့အသစ်လုပ်တဲ့ သံဃာတွေရော ၊ ပတ်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးတဲ့သံဃာတွေရော သာသနာရေး ဒုဝန်ကြီး လက်မှတ်ပါမှ ပတ်စ်ပို့ရုံးက လုပ်ပေးတယ် ၊ နောက်ပြီး သံရုံးကို ဗီဇာဝင်တဲ့အခါမှာလည်း သာသနာရေးဒုဝန်ကြီးရဲ့ လက်မှတ်ပါရမယ်လို့ ထုတ်ပြန် ထားတယ် ၊ သံဃာတွေ ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်က တစထက်တစ ပိုတင်းကျပ်လာတယ်"ဟု ရန်ကုန် သံဃာတော်တပါးက မိန့်သည်။
ယခင်က သံဃာတော်များ ကြွရောက်မည့်နိုင်ငံသံရုံးသို့ ဗီဇာဝင်ရာတွင် သာသနာ ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး ဦးစီးဌာန(သာ-ထွန်း-ပြန့်) ၏ ထောက်ခံချက်လိုသော်လည်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (ပတ်စ်ပို့) ပြုလုပ်ရာတွင်မူ မလိုခဲ့ကြောင်း
မွန်ပြည်နယ်တွင်း ကလေးစစ်သားများတွေ့မြင်ရပုံ(ဓါတ်ပုံ - ကောာင်းဝါ)
ရဲဘော်တွေရတဲ့လစာ နည်းရတဲ့ကြားထဲ ဘဏ်စုမယ်ဆိုပြီး မစုမနေရ ကျပ် ၅၀၀၀ ကို လစာကဖြတ်ပါတယ်၊ အခု စားဝတ်နေရေး မပြေလည်တော့ စုငွေတွေ ပြန်တောင်းတာ အာဏာပိုင်တွေက ထုတ်မပေးလို့ တပ်တွင်း မငြိမ်သက်တဲ့ အခြေအနေတွေ ရျိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုမငြိမ်မသက် ဖြစ်တဲ့တပ်ကတော့ မွန်ပြည်နယ် မုတ္တမမြို့ အခြေစိုက် တပ်မ ၄၄ လက်အောက်ခံ ခမရ ၁၀၂ ကဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်မ အဖေအပါအ၀င် တော်တော်များများက နှစ်ကြာကြာ စုဆောင်းထားတဲ့ စုကြေးငွေတွေ ထုတ်တာ အကြိမ်ကြိမ် တင်ပြတာကို ပယ်ချခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ်တွင်းအခြေအနေက ဆိုးဝါးတယ်၊ ရဲဘော်တော်တော်များ မပြေလည်ဘူး။ အရာရှိတွေရော ထင်းခုတ်ဝါးခုတ် လုပ်စားနေရတယ်လို့” အဲဒီတပ်က တပ်ကြပ်ကြီး တဦးရဲ့သမီးဖြစ်သူက ဘီဘီစီ ကိုပြောပြပါတယ်။
သူကိုယ်တိုင်က တပ်မှာမငြိမ်သက်လို့ လောလောဆယ် ရန်ကုန်မှာ ရောက်ရှိနေထိုင် နေပါတယ်။ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်တော့ ခမရ ၁၀၂ က ရဲဘော်တွေဟာ မုတ္တမ တောင်ပေါ်တက်ပြီး ထင်းဝါး ခုတ်ပြီး ရှာဖွေစားသောက် နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်၊ တပ်တွင်းမှာလည်း အမိန့်မနာခံမှုတွေ ရှိနေပြီး လုံခြုံရေးပါ အားနည်းနေတဲ့အတွက် မိသားစုဝင်တချို့ဟာ တပ်ပြင်ပကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါတယ်။
ရဲဘော်တွေ စုဆောင်းငွေတွေ ပြန်တောင်းတာကို တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ မပေးဘဲ ပယ်ချဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Copy from_ http://www.bbc.co.uk/burmese/
မိုင်းကုတ်- ထိုင်းနယ်စပ် ကျောက်မီးသွေးသယ်မည့် ကားလမ်းသစ် စီမံကိန်းကန့်ကွက်ရန် ဒေသခံလူထုစည်းဝေး
Wednesday, 21 July 2010 18:47 မွေခေါဝ် .
သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းကုတ်(ခေါ်)မိုင်းခုတ်ထွက်ကျောက်မီးသွေးများ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းဟိုင်းသို့ လမ်းသစ် ဖောက်သယ်ဆောင်မည့်စီမံကိန်းကန့်ကွက်ရန်အတွက် မယ်ဖှါ့လုံတက္ကသိုလ်တွင် ဒေသခံလူထုသဘောထားအစည်း အဝေးပြုလုပ်ကြောင်း ဂျူလိုင် ၁၈ ရက်ထုတ် ချင်းဟိုင်းသတင်းစာ၌ ရေးသားထားသည်။
အစည်းအဝေးကို ဂျူလိုင် ၁၇ ရက် ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း မယ့်ကျန်းမြို့နယ် မယ့်ဖှါ့လုံတက္ကသိုလ် လွယ်တွန်းခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ၌ မယ့်ဆလောင်း(အပြင်)၊ မယ့်ဆလောင်း(အတွင်း)၊ မယ့်ဖှါ့လုံနှင့် မယ့်စန်းကျေးရွာအုပ်စု ကောင်စီအသီးသီးမှ အယောက်
ကိုမင်းကိုနိူင်နှင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ(တိုကျို)။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၂၁)ရက်။
ကိုမင်းကိုနိူင်နှင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ အပါအ၀င် နိူင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တောင်းဆို ဆန္ဒပြသည့် အခမ်းအနားကို တိုကျိုမြို့ရှီနာဂါဝါအရပ်ရှိ စစ်အခွန်ရုံး(မြန်မာသံရုံး)ရှေ့ ၌ ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများတိ်ု့မှ ဇွန်လ(၂၁)ရက်နေ့နေလည် ၃း၀၀ နာရီ မှ ၄း၀၀ နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များတို့၏ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးများအပေါ် ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံမူတွေ ယုံကြည်ချက်အပေါ်မှာ ရဲရင့် ပြတ်သားစွာ အမှန်တရားဘက်မှ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည် ပေးခဲ့ကြသည့် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များတို့ကို လေးစားသောအားဖြင့် ဂျပန်ရောက် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များတို့မှ ဂုဏ်ပြု အမှာစကားများ ပြောခဲ့ကြားခဲ့ကြပါသည်။
တရားဥပဒေမဲ့ မတရား ဖမ်းဆီးခံနေရသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ အပါအ၀င် နိူင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက် ရေးအတွက် လစဉ်(၂၁)ရက်နေ့ ရောက်တိုင်း ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမူများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ယနေ့ပြုလုပ်သည့် ဆန္ဒပြပွဲ အခမ်းအနားတွင် အင်အား(၅၀)ကျော်ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Posted by PNSjapan at 7:19 PM0comments
Posted by Ma Nandar at 4:35 AM0comments
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဗမာလူမျိုး တသိန်း နေရာချထားရန် မဟာဗျူဟာဖြင့် စီစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျား ကချင်ပြည်နယ် နှင့် အိန္ဒိယ နယ်စပ်ရှိ ဟူးကောင်းတောင်ကြားဒေသ တည်နေရာပြ မြေပုံဖြစ်ပါသည်။(RFA Map)
၂၀၁၀ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ မဲအပြတ်သတ်နဲ့ အနိူင်ရရှိရေးအတွက် ဧရာဝတီတိုင်း နာဂစ်မုန်းတိုင်းသင့် ဒေသက ဗမာလူမျိုး တသိန်း ကို ကချင်ပြည်နယ် ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်း ဒေသမှာ စနစ်တကျ ပို့ဆောင်နေရာချဖို့ မဟာဗျူဟာ ချမှတ်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကို တနိုင်းမြို့အခြေစိုက် ဒေသကွပ်ကဲရေး စစ်ဌာနချုပ်က အကောင်အထည် ဖေါ်နေတာဖြစ်ပြီး လောလောဆယ်အထိ လူတသောင်းလောက် နေရာချထားပြီးပြီ ဖြစ်တယ်လို့ ကချင် သတင်းဌာန အယ်ဒီတာ ဦးနော်ဒင်းက ပြောပါတယ်။
“ မဲလို့လည်း ပြောလို့ရတယ် လူလို့လည်ဲး ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် ဒီထောက်ခံမဲပေါ့ အစိုးရပါတီကို ထောက်ခံမဲ ပေးမဲ့ လးတသိန်းကို တနိုင်း ဒစခက တာဝန်ယူတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ကျွန်တော်တို့ ကချင်ပြည်နယ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် စိုးဝင်းနဲ့ ဒီနေပြည်တော်ကရှိတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း ဒီ ဒစခ တနိုင်းက ကတိပေးထားတဲ့ ဆိုတဲ့ဟာကို ကျွှန်တော်တို့ သိရတယ် ” ။
ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းဒေသဟာ အိန္ဒိယ-မြန်မာ လီဒို လမ်းမကြီးအနီး တည်ရှိပြီး စီးပွါးရေးအရရော စစ်ရေးအရပါ မဟာဗျူဟာကျတဲ့အတွက် ဒီဒေသကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ စစ်အစိုးရက လွန်ခဲ့သည့် ၁၅ နှစ်လောက်ကတည်းက စနစ်တကျ ပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအနိုင်ရရေးအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေကိုတော့ အခုနှစ် မတ်လကစလို့ စစ်အစိုးရ နေပြည်တော်ရဲ့ ညွန်းကြားချက်နဲ့ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမျူး ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်း တနိုင်းအခြေစိုက် ဒေသကွပ်ကဲရေး စစ်ဌာနချုပ်နဲ့ ညှိနှိုင်း စီစဉ်ခဲ့တာလို့ ဦးနော်ဒင်း ကပြောပါတယ်။ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက ပြောင်းလာမဲ့ လေမုန်းတိုင်းဒဏ်သင့် အိုးအိမ်မဲ ပြည်သူ တသိန်းဟာ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးမှာ မြေသြဇာ အထူးကောင်းမွန်တဲ့ အဲဒီဟူးကောင်းဒေသမှာ ဆက်လက်အခြေချ နေထိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနိုင်အောင် စစ်အစိုးရက အသေးစိတ် စီစဉ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်၊ ဒ့ါပြင စစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့ ယုဇန ကုမ္မဏီ တို့ကိုလည်း ဟူးကောင်းဒေသမှာ ကြံနဲ့ ပီလောပီနံ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတွေ အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ဖို့ လယ်မြေ ဧက နှစ်သိန်းကျော်ကို လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သတင်းမှတ်တမ်း မူရင်း ။ ဗီအိုအေ သတင်း
Monday, July 19, 2010 .
မနက် ၇ နာရီ ကတည်းက ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုခ်နဲ့ အာဇာနည်ကုန်း အနားမှာ သံဆူးကြိုးတွေ၊ မြောက်မြား စွာသော လုံထိန်းရဲတွေ၊ မီးသတ် ကားတွေ၊ လက်နက်ကိုင် စစ်သားတွေ၊ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ အ၀တ်အစားတွေ ဝတ်ထားတဲ့ စွမ်းအားရှင်တွေ၊ အချုပ်ကားတွေနဲ့ ရှုပ်ယှက်ခတ်လို့ နေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေက မိုးမရွာခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့မှာတော့ မိုးပေါက်လေးတွေ တဖွဲဖွဲနဲ့မို့ ရာသီဥတုက ချမ်းစိမ့်စိမ့် ဖြစ်နေတယ်။
“ဒီလမ်းက ဖြတ်လို့မရဘူး၊ ဟိုဘက် လမ်းကသွား။ ဒီမှာ သံဆူးကြိုးတွေ ချထားတာ မမြင်ဘူးလား” ဆိုတဲ့ ဒုတိယရဲမှူး အဆင့်ရှိသူ တယောက်က လေသံခပ်မာမာနဲ့ ရွှေတိဂုံ ဘုရား အရှေ့ဘက် မုခ်က ၀င်လာတဲ့ ကားတွေကို အော်ဟစ် ပြောဆိုနေတယ်။
Posted by Ma Nandar at 3:38 PM0comments
(၆၃)ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား-ဂျပန်
(၆၃)ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ဂျပန်နိုင်ငံ Shezuoka-kan ဟာမမတ်စု မြို့ “ဂျပန် မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး တည်မြဲပါစေ” ကျောက်စာတိုင် တည်ရှိရာတောင်ပေါ်သို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် LDB နှင့် နာဂိုယာမြို့ရှိ LDB ဌာနခွဲ့တိုမှ ဦးစီး၍ သွားရောက်၍ ဂုဏ်ပြုခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာပြည်ကို ဗြိတိသျှကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင်တကွ ရဲဘော်သုံးကျိပ်တို့ကို စစ်ပညာသင်ပေးခဲ့သည့် ဗိုလ်မှူးကြီး ဇူစူးကီး (မြန်မာ အမည် ဗိုလ်မိုးကြိုး)နေရပ်ဖြစ်သည့် ဟာမမတ်စုမြို့တွင် တည်ရှိသည့် “ဂျပန် မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး တည်မြဲပါစေ” ကျောက်စာတိုင်ရှိရာ တောင်ပေါ်သို့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် အသက်ပေးစွန့် ခဲ့ကြသည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများတို့ကို အလေးပြုခြင်း လွမ်းသူ့ပန်းခွေချ ဂုဏ်ပြုခြင်း၊ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးခြင်းတို့မှ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများတို့ကို ဂါရ၀ပြုပြီးသည့်နောက် အခမ်းအနား ပထမပိုင်းအစီအစဉ် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယပိုင်း အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား အစီအစဉ်ကို ဟာမမတ်စုမြို့ ပန်းခြံအတွင်းရှိခမ်းမတခုတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားတွင် စုစုပေါင်း ၈၀ ကျော်ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
သတင်းမှတ်တမ်း ။ ZawZawAung
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ ။ ZawZawAung / Aung Htoo Thein
မန်တုံ ဒေသအတွင်း TNP စည်းရုံးရေးမှူးများ ကန့်သတ်ခြင်းခံနေရ
၂၀၁၀ ဇူလိုင် ၁၈ ရက်။
တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ(TNP)စည်းရုံးရေးမှူးများက ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မန်တုံမြို့ မယက ဥက္ကဌဦးကျော်ဇင်၏ ကန့် သတ်မိန့်ကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများထံမှ ပါတီအဖွဲ့ဝင်များ ထောက်ခံမဲ ရရှိရန်အတွက် စည်းရုံးရေးဆင်းရာတွင် အဟန့်အတားရှိနေသည်ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ စည်းရုံးရေးမှူး တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
၄င်းစည်းရုံးရေးမှူးက“ ၇ ရက်နေ့ ဇူလိုင်လမှာ မယက ဥက္ကဌ ကမင်းတို့ စည်းရုံးရေးဆင်းချင်ရင် မယက ရုံးကို(၇)ရက် ကြိုတင်ပြီး အကြောင်းကြားရမယ်ဆိုတဲ့ အမိန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အဲဒီမတိုင်ခင် စည်းရုံးရေးဆင်းနေတဲ့ ပါတီဝင်တွေက ဆက်သွားရမလို၊နောက်ဆုတ်ပေးရမလိုဖြစ်နေတယ်။နောက်ထပ် ဆက်ဆင်းရမဲ့သူတွေလည်း ကိုယ်ဘယ်လိုသွားပြီး စည်းရုံးမလဲ ရွာသားတွေဆီကို ဘာတွေသွားပြောမလဲဆိုတဲ့ အချက်လက်နဲ့ အစီအစဉ်တကျ ရေးပေးရမယ်ဆိုတော့
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ မျိုးဆက်သစ် ကလေးငယ်များ၏ ပန်းချီသင်တန်း ဖွင့်လှစ် သင်ကြားခဲ့ရာ ယနေ့ ၁၇.၇.၂၀၁၀ (စနေ) နေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရုံးချုပ်မှ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်တွင်းရှိ တိုင်တစ်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း ရှေးဟောင်း ဆုတောင်းပြည့် ငါးမာရ်အောင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် မြတ်ကြီးအတွင်းနှင့် အနီးပါတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကြာဖြူကန်တို့တွင် ပန်းချီဆရာကြီး ဦးဝင်းကြည်မှ ဦးဆောင်၍ Outdoor ရေဆေးရေးချက်များကို သွားရောက်ရေးဆွဲ သင်ကြားခဲ့ကြသည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူနှင့် အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဖေ (ခ) ရွှေဇီးကွက်တို့ သွားရောက်အားပေး ကြည့်ရှုကြသည်။
မျိုးဆက်သစ်ကလေးများသည် ပန်းချီပညာရပ်တွင် စိတ်ဝင်စားမှု၊ ကြိုးစားမှုတို့ကြောင့် တိုးတက်မှု
(၆၃)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် စာတမ်းဖတ်ပြိုင်ပွဲ အခမ်းအနား(တိုကျို)။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်။
(၆၃)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် စာတမ်းဖတ်ပြိုင်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဂျပန်နိူင်ငံရောက် မြန်မာနိူင်ငံသားများ၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ (JAC)မှ ဦးစီး၍ တိုကျိုမြို့ Toshimaku Minami Otsuka Dai Ichi ခမ်းမ၌ ညနေ ၅း၃၀ နာရီ မှ ၉း၀၀ နာရီ အထိ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။
ယနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကမှာ စစ်အာဏာရှင်တို့က မြန်မာသမိုင်း အစစ်အမှန်ကို မှေးမှိန်တိမ်ကော ပပျောက်အောင် ကြံစည်ပြုမူ လုပ်ဆောင်နေခြင်းကို ဖယ်ရှားရန် မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေသည့်အပြင် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများက တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် အသက်စွန့် ပေးအပ်ခဲ့တဲ သမိုင်းအမွေအနှစ်ကောင်းများကို အမျိုးသားရေး တာဝန်ကြီးတရပ် အနေဖြစ် ယနေ့ခေတ် မျိုးဆက်လူငယ်များ တာဝန်ကြေစွာ ဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းသွားနိုင်ရန် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ မျှော်မှန်းခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးမှာ ယနေ့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ ပုခုံးပြောင်းတာဝန်ယူသွားနိုင်ရန်အတွက် ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင်ဂျပန်နိုင်ငံရောက်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်(၇)ဦးတို့မှအမှတ်ပေးဒိုင်များအဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး မျိုးဆက်သစ် လူငယ် ၁၁ ဦးတို့က သမိုင်းနောက်ခံ အချက်အလက်
၂၀၁၀ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်။
မြန်မာလူမျိုးတို့ ကပ်ဆိုဒ်နေ၍လား၊ ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြန်နေ၍လား၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ဒါဏ်ကြောင့်လား မသိ … ကျွန်တော်တို့၏ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းသို့ လာရောက်ပြသ ကုသကြသော လူနာဦးရေသည် တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုမိုများပြား လာသည်။ ယခုဆိုလျှင် နေ့စဉ် လူနာ (၂၀၀) ခန့်ကို အခမဲ့ ကုသပေးနေလျှက်ရှိသည်။ ကုသိုလ်ဖြစ် ဆရာဝန်ကြီး၊ ဆရာဝန်မကြီးများ၏ စေတနာ ပံ့ပိုးမှုတို့ကြောင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းသည် လူမျိုးဘာသာ ဆင်းရဲချမ်းသာ မိတ်ဆွေရန်သူမရွေး လူနာများ၊ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့သူများကို နွေးထွေးပျူငှာစွာ အခမဲ့ ကုသပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
လူနာဦးရေ များပြားလာသည်နှင့်အလျှောက် လူနာများ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရန် စောင့်ဆိုင်း နားခိုရသော နေရာသည် အဓိကဖြစ်တော့သည်။ နေပူ မိုးရွာထဲ ဒီအတိုင်း စောင့်ဆိုင်းခိုင်း၍ မဖြစ်။ ဥပေက္ခာပြု၍ မဖြစ်။ အားကိုးတကြီးနှင့် ဆေးဝါးကုသမမှု လာရောက်ကုသ ခံယူကြသော လူနာများအား နွေးထွေးပျူငှာ ကြင်နာစွာ ဂရုစိုက်ရန်ကျွန်တော်တို့၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ယခင် ယာယီဆောက်လုပ်ထားသော လူနာနားနေဆောင်အားဖျက်၍ ခိုင်ခန့်မှု၊ ငြိမ်းအေးမှု၊ တည်တံ့မှု၊ ကြည်နူးမှုများနှင့် ပြည့်စုံသော အဆောက်အဦးကို တတ်သိပညာရှင်တို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ အကောင်အထည်ဖေါ် တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ လေ၀င်လေထွက် ကောင်းရမည်၊ စိတ်အေးချမ်း သာယာရမည်၊ ကြည်နူးစေရမည်၊ ဗဟုသုတရစေရမည် စသည့် ပေးဆပ်မှုတို့နှင့် ပြည့်စုံ စေရန် သစ်ပင် ပန်းမာလာများကိုလည်း စိုက်ပျိုးပေးခြင်း၊ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းရန် ဆောက်လုပ် ပေးထားခြင်း၊ သန့်စင်ခန်းသွားရန် လွယ်ကူစေခြင်း၊ သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်စေခြင်း၊ နားနေရာတွင် အဆင်ပြေ သက်တောင့်သက်သာ နားနေရန် ထိုင်ခုံများ စီစဉ်ပေးထားခြင်း၊ မသန်မစွမ်း လူနာ၊ အသက်ကြီးရင့်သော လူနာများအား Wheel Chair နှင့် စီစဉ်ပေးခြင်း၊ ဆရာဝန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေရချိန် တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ပေးဆပ်မှု DVD အခွေများကို TV Screen နှင့် ပြသပေးခြင်း၊ မေတ္တာပို့သံ တရားဓမ္မများကို ဖွင့်လှစ်ပေးထားခြင်းတို့ကြောင့် လူနာများသည် ဆရာဝန်အား မပြသခင် ကတည်းက သူတို့၏ ရောဂါဝေဒနာ တစ်ဝက်လျော့ပါး သွားစေတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
သုခ နားနေဆောင်အား ၁၇.၇.၂၀၁၀ (စနေ) နေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ရွှေဇီးကွက် ၏ မိဘနှစ်ပါးတို့မှ မုန့်ဟင်းခါးဖြင့် လူနာများ၊ ပရိသတ်များ၊ အသင်းသူ/သားများ၊ အလှူရှင်များအားကျွေးမွေးလှူဒါန်းကာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
အများပြည်သူ (ပြည်တွင်း ပြည်ပအလှူရှင်) တို့ လှူဒါန်းထားသော အလှူငွေတို့ဖြင့် ဆေးဝါး ကုသကြမည့် အများပြည်သူတို့အတွက် ရောဂါဝေဒနာများကို သက်တောင့်သက်သာ ကုသနိုင်ရန် အတွက် စိတ်အေးချမ်းမြေ့စွာ နားနေနိုင်ရန်အတွက် “သုခ နားနေဆောင်” အား အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ် ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါ၍ အများပြည်သူ အလှူရှင်အပေါင်းတို့ သာဓု အနုမောဒနာ ခေါ်ဆိုနိုင်ရန် တင်ပြလိုက် ပါသည်။
တိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်များကို ကိုင်ဆောင်ထားသော KNU ကရင်စစ်သည်မျာ။ photo; AFP
၂၀၁၀ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်။
ရွေးကောက်ပွဲကာလ နီးလာချိန်မှာ စစ်အစိုးရတပ်တွေက ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) နယ်မြေထဲမှာ တကြော့ပြန် စစ်ရေး လှုပ်ရှားလာကြောင်း KNU တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ ခမရ(၄၀၁) (၄၀၆) (၄၀၉) တပ်ရင်းသုံးရင်းက ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ်ကြားဒေသကို ခြေကုတ် ယူလာရာက အခုလို တိုက်ပွဲတွေ ပေါ်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 4:34 PM0comments
http://nldlajb.blogspot.com/ မှ ကူးယူခဲ့ပါသည်။
၆၃ နှစ်မြောက် ကေအဲန်ဒီအိုနေ့ နယ်စပ်တစ်နေရာတွင် ကျင်းပ
၆၃ နှစ်မြောက် ကေအဲန်ဒီအိုနေ့ကို နယ်စပ်တစ်နေရာတွင် ကျင်းပနေပုံ
သောကြာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 16 ရက် 2010 ခုနှစ်
ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(ကေအဲန်ဒီအို)မှ ကြီးမှူး၍ ၂၀၁၀ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ၆၃နှစ် မြောက် (ကေအဲန်ဒီအို)ဒေး အခမ်းအနားကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တနေရာတွင် ယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ရဲတပ်သားတွေ အခက်အခဲက ရဲချုပ်ခင်ရီထံ တင်ပြထား
မြန်မာစစ်တပ်အတွင်းမှာ စားဝတ်နေရး မပြေလည်တဲ့အတွက် အကြပ်စစ်သည်တချို့ နှုတ်ထွက်ကြတာတွေ တပ်ရင်းကို စွန့်ခွါထွက်ပြေးကြတာတွေ ရှိနေချိန်မှာပဲ ရဲတပ်ရင်းတွေ အတွင်းမှာလဲ အလားတူ အခက်အခဲ့တွေ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ မကြာခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲ ထွက်ပြေးလာတဲ ရဲတပ်သားတစ်ယောက်က ပြာပါတယ်။
သံလျင် အအမှတ်(၇) ရဲတပ်ရင်းကနေ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးရက် ကပဲ ထွက်ပြေးလာတဲ့ ရဲတပ်သားက သူတို့တပ်ရင်းထဲမှာ လစာ မလုံလောက်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီဆီ စာတင်ထားတာ အခုထိ ဘာမှပြန်ပြီး မကြားရသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
စစ်တပ်ထဲမှာ တပ်သားတစ်ယောက်က ရိက္ခာ သုံးပုံ ရရင် ရဲတပ်သားတွေကတော့က တစ်ပုံပဲရကြတယ်၊ အဲတာကြောင့် လူပျို လူလွတ်တွေထက် မိသားစု ရှိသူတွေမှာ ပိုပြီး အခက်အခဲ့ရှိကြတယ် လို့လဲ အဲဒီ ရဲတပ်သားက ပြောပါတယ်။
သူလို ရဲတပ်သားတစ်ယောက်က လစာ ကျပ် နှစ်သောင်း ရတဲအထဲက တစ်သောင်းကို ဘဏ်စုကြေးထည့်ရတော့ ကျန်တဲ့ငွေနဲ ဘယ်လိုမှ မလောက်ငဘူးလို့လည်း သူကပြောပါတယ်။ သံလျင်တတါးပေါ်ကို ဖြတ်သွားတဲ ကားတွေဆီက ကောက်ခံရရှိတဲ့ငွေ တွေကိုလည်း အထက်လူကြီးတွေကသာ ရယူကြပြီး ကျန်တဲ့ အောက်ခြေက ရဲသားတွေ ဘာမှ မခံစားကြရဘူးလို့ သူကဆက်ပြောပါတယ်။
သူတို့ ရဲတပ်ရင်းမှာ အလားတူ ထွက်ပြေးသွားသူ ငါးယောက်ရှိသွားပြီလို့လည်း သံလျင် အမှတ်(၇) ရဲတပ်ရင်းက ထွက်ပြေးလာသူ ရဲတပ်သားက ဘီဘီစီ ကိုပြောပါတယ်။
သတင်းမူရင်း ။ ဘီဘီစီ
USDP အဖွဲ့ ဝင်များ ပါတီ မဲရရှိရန် TNP ပါတီနာမည် အလွဲသုံးစားပြုပြီး စည်းရုံးရေးဆင်း
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မန်တုံမြို့ရှိ USDP ပါတီအဖွဲ့ ဝင်များကပါတီမဲ ရရှိရေးအတွက် တအာင်း(ပလောင်)လူကြီးများ၏ နာမည်ကို အလွဲသုံးစားပြုပြီး ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မိုင်းမော်ဘက်သို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဆင်းနေသည်ဟု စည်းရုံးခြင်းခံရသော ဒေသခံ ရွာသားတစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
“သူတို့ပြောတာက အထက်ကပလောင်လူကြီးတွေ ခိုင်းတယ်လို့ပြောတယ် ဒါကြောင့် ရွာကလူတွေ တအာင်းလူမျိုးပါတီ(TNP) ကခေါင်းဆောင်တွေ ထင်နေကြပြီး အဖွဲ့ဝင်နာမည်စာရင်းတွေပေးတယ် တချို့လူတွေ ဓါတ်ပုံရိုက်၊ဖောင်တွေ တိတ်တဆိတ်နဲ့ ဖြည့်ခိုင်းတာမျိုး လည်းရှိတယ်”ဟုရွာခံတစ်ဥိးကပြောပြသည်။
၄င်း USDP ပါတီအဖွဲ့ဝင်များသည် ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ထောက်ခံမဲများ ရရှိရန်အတွက် မန်တုံမြို့ရှိ တအာင်း(ပလောင်)ရွာများဖြစ်သည့် ဟိုလင်းအုပ်စု၊ခိုမုန်းအုပ်စု ၊နားအော်ကြီးအုပ်စု၊ကျယ်ကောင်အုပ်စု၊ဆိုင်းလိန်အုပ်စု စသည့်အုပ်စုတွင်းမှ ကျေးရွာ ပြည်သူများထံ ပလောင်လူကြီးများ၏ ခိုင်းစေ ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဟု လိမ်လည်ပြီး မဲဆွယ်စည်းရုံးရင်း ပါတီအသင်းဝင် လက်မှတ်ပါ ထိုးခိုင်းသည်ဟု ဒေသခံရွာသားများမှ သိရသည်။
စည်းရုံးခြင်းခံရသည့် ခိုမုန်းရွာသားတစ်ဦးက“ကျတော်တို့က မသိကြဘူးလေ သူတို့လက်မှတ်တွေ ထိုးခိုင်းတယ် ပလောင်လူကြီးတွေ ခိုင်းတယ်လို့ပြောတော့ ရွာကလူတွေ လက်မှတ်ထိုးပေးတာပါပဲ ရွာက လူတစ်ဝက် ကျော်ကျော်လောက်ဆိုရင် စာမဖတ်တတ်တဲ့ လူတွေပဲ သူတို့ပါတီကို မဲပေးတာ ဖြစ်တယ်လို့ မှမသိကြတာ”
အဆိုပါ အကြောင်းအရာနှင့်အလားတူ ဆိုင်လိန်ရွာတွင် အခြေအတင်ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သော ဆိုင်လိန် ရွာသားတစ်ဦးက“၂၁ ရက် ဇွန်လ မှာ ဆိုင်းလိန်ရွာ ဥက္ကဌနဲ့ အဲဒီကြံ့ဖွံ့ပါတီအဖွဲ့ တွေက ပြဿနာဖြစ်တယ် ဘာကြောင်ဆိုတော့ သူတို့က ပလောင်လူကြီး နာမည်တွေ အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး နာမည်စာရင်းတွေ ကောက်ထားတယ် နောက်နေ့မှ ဓာတ်ပုံဆရာလွတ်ပြီး ဖောင်ဖြည့်ဖို့ ဓာတ်ပုံရှိက်မယ်ပေါ့ အဲ့ဒီမှာ ဥက္ကဌက ဘာအတွက် လည်းမေးတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်ဖြစ်ဖို့ မနေ့က နာမည်စာရင်းပေးထားတဲ့သူတွေကို ပုံလာရိုက်တာ လို့ပြောတယ်”
“အဲ့ဒီမှာ ဥက္ကဌ က မင်းတို့ ကြံ့ခိုင်ရေးဆိုရင် ငါတို့ အဖွဲ့ဝင်မလုပ်ဘူး ပုံလည်းမရိုက်နိုင်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ် မင်းတို့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်ဖြစ်စေချင်ရင် မင်းတို့ကိုယ်တိုင်စည်းရုံး ပလောင်လူကြီတွေလို့ ညာပြီး ငါတို့ကိုမပြောနဲ့ ငါတို့လက်မခံနိုင်ဘူး မနေ့က လာသွားတဲ့သူတွေကိုလည်း မင်းတို့ကိုယ်တိုင်သွားပြော မလိမ့်တပတ်နဲ့ ငါ့ကို ခိုင်းတာမျိုး မလုပ်နဲ့ လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်” ဟု ပြောပြသည်။
မန်တုံမြို့တွင်းမှ ပြည်သူများထံ ထောက်ခံမဲရရှိရန်အတွက် စည်းရုံးရေးဆင်းနေသည့် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲ ကောက်ဝင်ပြိုင်မည့်ပါတ်ီများ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားးပါတီ(TNP) ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး (တစည) ပါတီ နှင့် USDP ကြံ့ဖွဲ့ ပါတီ ရှိသော်လည်း USDP ပါတီအဖွဲ့ ဝင်များမှ မဲရရှိရေးအတွက် ယခုလို ပြည်သူများအား လိမ်လည် အတင်းမဲဆွယ်ခြင်းများ ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဖုန်း-၀၈၀ ၁၁၈ ၄၄၇၉၊ ၀၈၂ ၈၈၇ ၈၄၄၃
Posted by PNSjapan at 10:50 PM0comments
14 ဇူလိုင် 2010
သတင်းမှတ်တမ်း မူရင်း ။ ဗွီအိုအေ မြန်မာ
ဧရာဝတီ Thursday, July 15, 2010 .
“ကသာ ထောင်ကနေ လွတ်လာပြီလို့ သိရပါတယ်” ဟု နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (AAPP) မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးတိတ်နိုင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
Copy from_ www.irrawaddy.org
ခိုင်လင်း / ၁၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၀
Copy by_ www.khitpyaing.org/
သတင်းမှတ်တမ်း မူရင်း ။ သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ဘစောတင် Wednesday, July 14, 2010 . ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ထံသို့ ပူးပေါင်းသွားသည့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လက်နက် ပြန်အပ်နှံရန် ဖိအားပေးသည့် အနေဖြင့် ကျန်ရစ်သော မိသားစုဝင်များကို DKBA က နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းမှုများ ပြုလုပ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Copy frpm _ www.irrawaddy.org
ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက် ၂၀၁၀
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဒေါက်တာတူးဂျာသည် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဆက်စပ်လျှက်ရှိသဖြင့် သူဦးဆောင်သော ကချင်ပြည်နယ် တိုးတက်ရေးပါတီ KSPP ကို ပါတီထောင်ခွင့် ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း အမှတ် ၁ စက်မှုဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းက ကချင်ခေါင်းဆောင်များကို
အိန္ဒိယ အစိုးရက ၁၂ နှစ်ကျော်ကြာ ထိန်းသိမ်းပြီး တရားစွဲဆို ထားသော မြန်မာ သူပုန်များကို ထောင်ဒဏ်နှင့် ငွေဒဏ်များ အသီးသီး ကျခံစေရန် ကာလကတ္တား တရားရုံးမှ ယမန်နေ့က အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ သော်လည်းကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်မြောက်ရန်
ဂျပန်နိုင်ငံ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပုံရိပ်များ....
ဒီနေ့ အလုပ်အားလပ်ရက် ရတဲ့နေ့မှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့တော် ကျိုတိုမြို့ကို မိတ်ဆွေ (၃)ဦးနဲ့ အလည်တစ်ခေါက် ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သွားရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ကြားခဲ့တုန်းက နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အမေစုအတွက် အမှတ်တရ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အခန်းကိုပါ။ ကျိုတိုရောက်တော့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကျိုတိုဘူတာကနေ မိနစ်(၂၀)လောက် ဘတ်(စ်)ကား စီးပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်ကို ရောက်ပြီး မေးမြန်း စုံစမ်းကြည့်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အခန်းကို ကြည့်ရှူခွင့် ရဖို့အတွက် ကြိုတင်အကြောင်းကြားပြီး ရက်ချိန်းယူရပါတယ်တဲ့.. ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဝေးလံတဲ့ တိုကျိုမြို့က တကူးတက လာကြည့်တယ် ဆိုတာသိတော့ သူတို့စီစဉ်ပေးပါတယ်။ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်ကနေ နောက်ထပ် တက္ကစီစီးပြီး အမေစုနေခဲ့တဲ့ အဆောင်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သွားရောက်ခွင့် မှတ်တမ်းတင်ခွင့် ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် ရင်ထဲမှာ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာ ကြည်နှူးခဲ့ကြရပါတယ်။ အဆောင်ရှေ့ မြင်ကွင်းကို ကြည့်ပြီး ငါတို့ခေါင်းဆောင် ဒီနေရာမှာ နေထိုင်ခဲ့တာ ပါလားလို့ .. တွေးတော နေမိလိုက်တယ်။ အဆောင်ရဲ့ (၃)ထပ်ကို ဓာတ်လှေကားနဲ့ တက်သွားတဲ့ အခါမှာတော့ Aung San Suu Kyi Room ဆိုတာကို ကြေးနီပြားပေါ်မှာ ရေးထိုးထားတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ နောက်အခန်းက ကျွန်တော်တို့ ကြိုတင် အကြောင်းကြားပြီး လာရောက်တာ မဟုတ်တဲ့အတွက် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ ပုံစံတူတွေ ပြုလုပ်ပေးဖို့ အချိန်မရှိပေမယ့်… ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျောင်းမှာ နေထိုင်စဉ် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေနဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် ၈၈၈၈ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ထိုစဉ်က ဂျပန်သတင်းစာပါပုံတွေကို မှတ်တမ်းတင်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်…။ ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းဆောင်ဟာ ၁၉၈၅ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တစ်ရက်နေ့ကနေ ၁၉၈၆ခုနှစ် ဇွန်လ(၃၀)ရက်နေ့အထိ ဒီအခန်းမှာ နေထိုင်ပြီး စာတမ်း သုတေသနပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စာတမ်းပြုစုခဲ့တဲ့ ခေါင်းစဉ်ကတော့ “ The History of the Burmese Independence Movement ” မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း ကို (၉)လကြာ အခန်းနံပါတ် E306 မှာနေထိုင်ပြီး စာတမ်းပြုစုခဲ့ပါတယ်..။
ကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှာ နေထိုင်ပြီး စာတမ်းပြုစုနေထိုင်ခဲ့စဉ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာဆန်ဆန် မြန်မာရိုးရာ အမျိုးသားဝတ်စုံ ကိုသာ ဝတ်ဆင်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်…။ အခန်းအတွင်းမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ Biography တွေရှိနေပါတယ်….။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မှတ်တမ်းစာအုပ်အတွင်းမှာတော့ နိုင်ငံပေါင်းစုံက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေးစား..မြတ်နိုးသူတွေရဲ့ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် လူထုခေါင်းဆောင်အတွက် အမှတ်တရတွေ ရေးထားတာကို ဖတ်ကြည့်ပြီး အထူးပီတိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်.။ အခုအချိန်မှာတော့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မတရားတဲ့ ခေတ်စံနစ်ကြီးထဲမှာ အဖိအနှိပ်ခံပြည်သူတွေ အတွက် မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေ ကိုအံ့တုရင်း ရင်ဆိုင် ပြည်သူတွေဘက်က မားမားမတ်မတ် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ဝင်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ ပြည့်သူ့အစိုးရသာ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့မယ်.. ဆိုရင် အခုချိန်မှာ ဆိုရင် ရင့်ကျက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ အနေနဲ့ အနှစ် (၂၀)ခရီးကို ရောက်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရတစ်ရပ် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ် တစ်ရပ်အနေနဲ့ အနှစ်(၂၀) အတွင်းမှာ အမှားအယွင်းတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ တိုင်းပြည်ထူထောင်ဖို့ အတွက် လုံလောက်တဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာပါ..။ နုပျိုငယ်ရွယ်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ လူထုခေါင်းဆောင်သာ ဦးဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့ အတူ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာ၊ချမ်းသာပြီး တိုင်းပြည်အကျိုးကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သလိုက်ပါတယ်..အမေ..။
လိုက်လံပို့ဆောင် ပေးသူအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by Ma Nandar at 10:20 PM0comments
Labels: ဓါတ်ပုံ, ဆောင်းပါး
Copy from _ voanews.com/burmese
Labels: ဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်း, ဗွီဒီယို, သတင်း
ဗိုလ်ချုပ်တွေက သိတ်ချမ်းသာကြတယ် တပ်သားတွေကြတော့ ဒုက္ခရောက်ကြတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်တွင်း မကျေလည်မူတွေ လစာ မလောက်ငှလို့ စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းမှုတွေကြောင့် တပ်မတ်ာသားတွေ အစုလိုက် အပြုံလိုက် နှုတ်ထွက်ခွင့် တောင်းခံနေတာ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ပြီး တပ်ကို ပြန်မသွားတော့တာတွေ ရှိနေပါတယ်။
ကျွှန်တော်က တပ်သားပါ၊ တပ်သား လစာက ၂၅၀၀၀ လောက်ပဲရတယ်၊ မလောက်ဘူး။ အပြင်မှာလုပ်ရင် ၅၀၀၀၀ ကနေ ၈၀၀၀၀ ကျပ် လောက်ရတယ်။ တပ်ထဲဝင်တာ အနေ အစား ချောင်မလားလို့ ၀င်တာ၊ တပ်ထဲမှာက ပိုဆိုးနေတယ်လို့ ရှမ်းပြည်နယ် ကလောမြို့အခြေစိုက် တပ်မ ၅၅ လက်အောက်ခံ နောင်ချို အခြေစိုက် ခမရ ၁၇ က တပ်သားတစ်ဦးက ဘီဘီစီ ကိုပြောပါတယ်။
တပ်ကပြေးရင် အရေးယူတယ်ဆိုပေမယ့် လွတ်အောင်တော့ ပြေးရတာပဲလို့ သူကဆိုပါတယ်။ တပ်ကပြေးတာရော ထွက်စာတင်တာရော ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်တာတွေရော ရှိတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
တပ်ရင်းမှူး ကအစ နှုတ်ထွက်စာတင်တယ်။သူ့ခမျာလည်း တပ်ရင်းရဲ စီးပွါးရေး ၊ လူမူရေး ၊ ကျမ္မာရေး အထွေထွေ အကျပ်အတည်း တွေကို ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းရတယ် အထက်ကို လိုအပ်ချက်တွေ တင်ပြတော့လည်း အမိန့်ပဲလာတယ် ၊ သူတို့တွေ တော်တော် အခက်အခဲ့ရှိပုံရပါတယ်၊ သူတို့တောင် ခက်ခဲ့တော့ ငယ်သားတွေ ပိုဆိုးတာပေါ့၊ ဒါကြောင့် ထွက်စာတွေ တင်ကြတာလို့ တပ်သားကပြောပါတယ်။ ရဲဘော်တွေက ခိုင်းတာလုပ်ရတယ် လိုအပ်ချက်တင်ပြတော့ အမိန့်ပဲပြန်ပေးတယ်။
တပ်ရင်းမှူးအပြင် ဒုအရာခံဗိုလ်၊ အကြပ်တပ်သား ရဲဘော်တွေက ဗျူဟာမှူးဆီ ထွက်စာတွေ တင်ထားပေမယ့် ခွင့်မပြုဘူး၊ ကြာပြီလို့ သူကပြောပါတယ်။ ဒါအပြင် အရာရှိငယ်တွေဖြစ်တဲ့ ဒုဗိုလ်တွေ ဗိုလ်တွေကလည်း ၊ မနက်ဘက် တန်းလည်း မစီတော့ဘူး ညနေဘက် အပြင်ထွက်ပြီ ညဘက်လည်း ပြန်မ၀င်ဘူး။ အပြင်ထွက် လောင်းကစားလုပ်၊ သောက်စား မူးယစ်တာတွေလုပ်ကြတယ်၊ တပ်ကဖွဲ့စည်းပုံ ပျက်နေပြီလို့ တပ်သားက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
လစာနည်းရတဲ့ကြားထဲ ဘဏ်မှာစုရမယ်ဆိုပြီး လစာကနေ တလ ၅၀၀၀ ကျပ်ဖြတ်တယ်၊ နှစ်ပေါက်လာပြီးနောက် လိုအပ်လို့ အဲဒီဆုငွေကို ထုတ်ပေးဖို့ပြောတော့ ထုတ်ပေးလိုက်ရင် မင်းတို့ပြေးမှာပဲ ဆိုပြီး မထုတ်ပေးဘူးလို့ သူကပြောပါတယ်။
လစာမလောက်ငှတော့ အကြပ် စစ်သည်တွေနဲ့ အရာခံဗိုလ်တွေရဲ့ မိန်းမတွေက ဈေးရောင်းရတယ်၊ ထင်ခုတ် အပြင်ထွက် ပိုက်ဆံရှာ စတာတွေလုပ်ပြီး စားဝတ်နေရေး ဖြေရှင်းနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Copy from_ www.bbc.co.uk/burmese